How to Control the Wifi Password — MYSTERY ZILLION
How to Control the Wifi Password
အကူအညီတခုတောင်းချင်လို့ပါ။ ကျတော်တို့ နယ်ဟိုတယ်မှာ ဧည့်သည်တွေသုံးဖို့အတွက် အင်တာနက်ကို wifi နဲ့ပြန်လွှင့်ပါတယ်။ password လည်းခံထားပါတယ်။ ဖြစ်တာက password ပေါက်ကြားမှုပါပဲ။ password ပြောင်းပြီး ဧည့်သည်လာသုံးရင်ပေးဖို့ FO ကိုပေးထားလိုက်တယ်။ မကြာပါဘူး တဟိုတယ်လုံး psw ပြန့်သွားတယ်။ နောက် ဧည့်သည်ကို FO က စာရွက်နဲ့ရေးပေးလိုက်တဲ့ psw စာရွက်ကို အခန်းထဲမှာ ထားခဲ့တယ်။ Hoskeeping ကရသွားတယ်။ အဲလိုနဲ့ psw သံသရာလည်နေလို့ဗျာ။ အဲဒါ ဧည့်သည်ကြီးပဲ သုံးနိုင်အောင် ဘယ်လို System တွေသုံးရမလဲ။ Router မှာ MAC နဲ့ပိတ်ရင်လည်း ဧည့်သည်ကို မှားပိတ်မိပြီး complain တွေလာမှာစိုးတယ်။ မစဉ်းစားတတ်တော့လို့ အကြံဉာဏ်ပေးကြပါအုန်း ဆြာတို့ရေ ( server system မသုံးထားပါ )
If you serve wifi for customer there have been place in hotel, you need wifi hotspot system . one user one password & many user many password . single sign on , learn at google hotspot mikrotik . I have service for you .